Wareysi - AfricArXiv
By Johanssen Obanda, 8 bilood 7 maalmood horaantii
By Johanssen Obanda, 8 bilood 8 bilood horaantii
By Johanssen Obanda & Priscilla Mensah, 10 bilood 3 bilood horaantii
By Johanssen Obanda & Priscilla Mensah, 12 bilood 3 bilood horaantii
Maxaa ka dambeeya dhimashada hoose ee loo arkay COVID-19 ee Afrika? Waa sidee isgaarsiinta cilmi baarista ee Afrika? Akhriso jawaabaha hawlwadeennimada ee Mudane Olabode ee saameynta rajada nolosha iyo SARS-Cov-2 genomic duwanaanshaha gudbinta COVID-19 iyo dhimashada Afrika.
By Johanssen Obanda & Priscilla Mensah, sano 1 3 bilood horaantii
Wareysiga withmer Özak ee Jaamacadda Koonfurta Methodist University (SMU)
Ma taqaannaa doorka kala duwanaanta, dhaqan u ekaanta iyo taariikhda horumarka dhaqaalaha iyo isku dhaca duruufaha Afrika? Wareysigan ayuu Dr. Ömer ku indha indheeyay mawduucan muhiimka ah wuxuuna sharxayaa shaqadooda ku saabsan doorka xuduudaha iyo isku dhaca oo ah mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee Afrika.
By Johanssen Obanda & Priscilla Mensah, sano 1 8 bilood horaantii
By Johanssen Obanda, 2 sano 3 bilood horaantii